Akawanda Sei Mashoko paPositi Akarurama? | Martech Zone
China, November 13, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kudos kuIndy Confluence yekuisa pa chiitiko chikuru che network pano muIndipolis nezuro. Kusiyana nezvakawanda zviitiko zve network, Indy Confluence inotungamirwa naBrett Healey uye Erik Deckers, yakaunzwa panhare yevanhu pano mudunhu kuti ipe zano-rakawedzerwa zano kune ese nhengo dzayo. Musoro wemwedzi uno waiti Nei Corporate Blogging Yakakosha Kubudiriro Kwekambani uye ini ndakakokwa kuve panhare.
Iwo mapaneru aive naChris Baggott, Rhoda IsraelovRodger Johnson, Kyle Lacy Neniwo.
Yakanga iri hurukuro huru asi musoro mumwe wakanamatira mukukamba kwangu: Mangani mazwi anofanirwa kuve neblog blog?.
Iyo hurukuro yakaenda mukati petafura uye vazhinji vevatauri vakasundira pithy mbiru uye iwo mazana mazana maviri nemakumi mashanu mazwi akaiswa kunze uko seakanaka. Seye 'refu kopi' blogger, ini ndakadzingwa nepaneru.
Kune vaverengi veblog rangu, unoziva ini handigone kana kumisikidza blog posvo mumashoko e250 (ichi chinyorwa muenzaniso wakanaka). Ndine toni yevaverengi, hukuru hwekutsvaga injini, uye nhamba inokura yevanyoreri - uye handimbo pithy! Ndakaongorora nhamba ye mazwi papositi uye ndikazvienzanisa nekutumira mukurumbira pane yangu bhurogu uye handina kumbowana kuwirirana.
Panguva ino, ndakafunga kutarisa mamwe mablog. Kwete mamwe mabloggi, zvakadaro. Ini ndakasarudza iyo yepamusoro 5 mhedzisiro paGoogle kana uchitsvaga Kubhuroka kweSEO. Ini ndinofunga chero munhu kumagumo epamusoro ehondo iyoyo achave nekumwe kuenderana kuzvinyorwa zvavo zvinogona kundipa imwe nzwisiso. Iwo mashanu mablog akaongororwa aive SEOmoz, SEO yeGoogle, Pamhepo Kushambadzira Blog, Hittail Blog, Uye Mazuva ese SEO Blog.
Sezvo aya mablog ari mune yakakwira vhoriyamu yekutsvaga mhedzisiro, ndiri kufungidzira kuti ese ari maviri anozivikanwa uye akakodzera. Ini ndakadhonza ekupedzisira gumi mablog mablog pa blog yezve makumi mashanu emablog mablog. Izvi, hapana nzira, yesainzi asi ndinotenda mhedzisiro yacho inodzokorora zvandakapokana panguva yepaneru.
Mazwi Per Mhedzisiro Mhedzisiro:
SEOmoz yaive neavhareji yemashoko mazana masere nematatu nemakumi matatu ane makumi mashanu neshanu pamashoko.
SEO yeGoogle yaive neavhareji yemashoko mazana matatu nemakumi matatu ane makumi mapfumbamwe nenomwe.
Wepamusoro Rank maBlog aive neavhareji yemashoko mazana manomwe mazana manomwe nemakumi mashanu neshanu pachinhu chimwe nepakati nepakati pemashoko mazana manomwe nemakumi mana nepfumbamwe.
Hit Muswe Blog yaive neavhareji yemashoko mazana maviri nemakumi mashanu neshanu pamhanyi aine wepakati pemakumi maviri nematatu emashoko pane posvo.
Mazuva ese SEO Blog yaive neavhareji yemashoko mazana mana mazana masere neshanu nemasere pane positi aine wepakati pemakumi mashanu emazwi pamashoko
Mhedzisiro yekupedzisira ivhareji ye 526 mazwi papositi uye wepakati 447 mazwi papositi. Pamashoko makumi mashanu akayerwa (50 pa blog), chete matanhatu acho aive asingasviki mazwi mazana maviri nemakumi mashanu. Munguva yakapfuura, ndakaratidza kuti saizi yepositi haina kukanganisa kuverenga kwangu kweblog. Zvino ini ndichazvitaura zvakare, rairo yandinayo yeMashoko paPositi ndeiyi:
Huwandu hwemazwi aunonyora pane posvo hunofanirwa kuve huwandu hwemazwi anotora kuzadzisa chinangwa chakakosha posvo. Ini ndinowedzera kuti huwandu hwemazwi pane positi hunofanirwa kunge hwakaenzana kuzadzikisa zvinotarisirwa nevaverengi varipo. Ini handiverengi huwandu hwemazwi - ini ndinove nechokwadi chekuti kana mumwe munhu akawana yangu blog posvo kubva kune yekutsvaga injini mhedzisiro ivo vanowana izvo zvavakavinga.
Tags: nhamba yemazwishoko count
Ziso rine kutarisa kuperetera
Nov 13, 2008 at 1:09 AM
Mashoko aya matsva kwandiri. Ini ndagara ndakakamura musoro muzvikamu zvinoverengeka kana zvanyanya kukura nekuti ini handidi kuti vaverengi vangu vakundwe nepfungwa inodarika yekupuruzira kutya. Ini pachangu, ini handifarire mawebhusaiti andinofanira kudzika pasi zvakanyanya. Zvakadaro, wangoratidza zvinofadza pano. Zvichida, ndinofanira kupedzisa musoro mune imwe post kunyange zvingatora mazwi anopfuura 2500. Ndinotenda nekutumira nyaya inofadza zvakadaro.
Nov 13, 2008 at 9:41 AM
Kana zvirimo zvine basa uye zvakakosha, seyako, Doug, saka kureba hakuna kukosha. Nekune rimwe divi, kana blogger ari kungotaura kuti anzwe achitaura (izvo zvinowanzoitika, zvinosuruvarisa), saka ndiyo imwe nyaya!
Nov 13, 2008 at 10:06 AM
A blog post inofanira kuva nemashoko akawanda sezvinodiwa kuti pfungwa yako isvike.
Hapana chekutaura? Hapana poindi = 0 mazwi
Zvichida chaunongofanira kutaura mutsara. Asi chirevo chakanaka chaizvo! Unogona kupedzisira wave mubhuku remakotesheni, nekuda kwetsotsi!
Hombe hombe yemafuta emhepo, asi inonakidza bhegi remhepo = nyora pa! Ngazvibude. Vent! Rant! Rave! Ndiani ane hanya nemazwi mangani???? Kana zvichiita kuti unzwe zviri nani, ita! (Izvi zvakanyanya kune asiri nyanzvi blogger.)
Vanhu VACHAverenga marefu matsamba KANA pfungwa dzakasimba zvekudzikwevera pamwe ... kana kunyora kwakashata, hapana huwandu hwemashoko kana kushomeka kwemazwi kunogona kuchengetedza positi.
Ko kiyi iri pano haisi yemukati here pane kuwanda kwemazwi? Kana iwe uine zvakanaka zvemukati, vanhu vanobatana newe uye nekudaro vanokupa iwe Google chiremera, kana kuchengetedza nhaurirano iri mhenyu mumashoko uye nokudaro kupa Google fungidziro yekuti webhusaiti yako inogadziridzwa nguva nenguva. Uye zviri nyore kuve nezvakanaka zvemukati neanopfuura 250 mazwi. Kana kuti pane zvandiri kurasikirwa nazvo?
Nov 14, 2008 at 10:13 AM
Kune vanhu vakambobhuroga, ndinofunga izvi hazvina musoro uye zvirimo ndimambo. Nekudaro, kune yekutanga-nguva blogger kana mubatanidzwa kufunga nezve blogging, uyu mubvunzo unouya nguva dzose saka zvakakosha kuti tiupindure.
"Nhamba yemazwi aunonyora pane imwe post inofanira kunge iri nhamba yemazwi anotora kuzadzisa chinangwa chikuru cheposvo"
Ndiro zano rine musoro randati ndamboverenga nezvenyaya iyi.
(Chokwadi, semunhu anonyora zvinyorwa zvirefu ndinorerekera 🙂 )
Vagara vachiverenga mabloggi angu vanoti vanofarira maitiro angu ekunyora, saka handisi kuzoachinja nekuti vamwe vanoti mazwi e250 anofanira kunge ari iwo max (inobvumirawo musanganiswa wakanaka wemazwi akakosha eSE zvakare).
Zvawatumira zvakazara neruzivo rwakanaka uye kuverenga kwakanakisa, saka hongu, kuraira kukuru: usatevedze 'yakagamuchirwa yakajairwa'; tsvaga zvinokuitira zvakakunakira uye rega kuverenga mazwi 🙂
Nov 14, 2008 at 8:08 AM
Ndakaedza chaizvo kutaura pfungwa iyi patakanga tichitaura nezvemusoro wenyaya paConfluence. Unozviita neZVIMWE kirasi. 🙂
@Cynthia Ida chokwadi chawataura Vent, Rant, uye Rave. Izvo zvinonyanya kuverengerwa zvinyorwa pablogi rangu ndepandinenge ndichipopota uye ndichipopota nezve chimwe chinhu. 🙂
Kune akawanda emanyepo muindasitiri iyi uye hapana ane mashiripiti bullet! Google ichiri kundipa mhinduro dzakaipa dzekutsvaga dzimwe nguva uye dzimwe nguva ndinonhuwa pakuwana chinyorwa chakanyorwa zvakanaka.
Ini ndinofunga zvakakosha kudzinga 'pfungwa' neimwe data kuitsigira! Tichiri kudzidza.
Yakanaka SEO zano
Kukadzi 14, 2011 na10:38 PM
Mashoko akanaka kwazvo! Ndinokutendai nekuigovera.
Gumiguru 19, 2011 pa 8:59 AM
Gumiguru 19, 2011 na1: 59 PM
Gumiguru 19, 2011 na2: 47 PM
Hapana chakafanana nekushandisa data kupfuudza-kutonga maonero. Maonero angu pachedu pachinyorwa (blog kana neimwe nzira) ndeye "Kunyora Kwakanaka Kunokunda!" Izvo zvirinani kunyora (girama, zvirimo, kuyerera kwerondedzero, nezvimwewo) ndiko kurebesa kwandichaverenga.
Maita basa nepost iyi nekuti ndanga ndichiedza kufunga izvi. Zvizhinji zvezvandinotumira zvinobva ku350 kusvika ku450 mazwi pane imwe post. Ndinoziva pandinoenda kubhurogi uye positi yacho inopfuura mazwi e500, ndinongo svetuka pamusoro payo. Ini handifunge kuti vanhu vazhinji vanofarira kuverenga mablog marefu. Ndinoedza kuburitsa pfungwa yangu mumashoko asingasviki 500. Pamwe ndiri kukanganisa. Zvisinei, kufunga kwangu chete. Sally
Zvita 4, 2011 na9:47 PM
Ini zvechokwadi ndinobvuma kuti vanhu vari kuverenga zvishoma. Isu tinosundidzira vatengi vedu kuti vashandise mapoinzi ane mabara, mifananidzo yakanaka, uye yakashinga/kusimbisa pese pavanokwanisa kutora iyo 'skimmers'. Kana uchienderana, ndinofunga kuti zvinonyanya kukosha… saka vanhu vanogona kuuya kuzotarisira chinhu chimwe chete nekushanya kwega kwega.
Zvita 15, 2011 na1:25 PM
Mwedzi wapfuura muhurukuro neshamwari dzakati wandei inotungamirwa naAllison Carter naJeremy Zucker zvakapedzwa nhamba chaiyo yemazwi pane positi yaive sezvaunotaura, "Huwandu hwemazwi hunotora kupedzisa chinangwa chikuru cheposvo."
Ndakanga ndichitsvaga nhamba yemashiripiti, uye ndakawana mhinduro chaiyo! Ndatenda, Mat
Huwandu hwemazwi aunonyora pane imwe post inofanira kuva nhamba yemazwi anotora kupedzisa chinangwa chikuru cheposvo.Izwi.
Izvi zvine rubatsiro zvakanyanya. Ndatenda. Ikozvino handisi kuvhunduka kana ndikasarova mazwi mazana matanhatu. Chii chiri kufunga pamifananidzo?
Mifananidzo yakakosha! Kwete kungotsanangura misoro yakaoma asi kubatsirawo kukwezva vaverengi kune zvemukati mako uye kuvabatsira kuzviyeuka. -
Ruzivo rwakanaka runobatsira. Ndainzwa kuti mazwi anopfuura 700 aizoita kuti muverengi arasikike. Tinotenda nekupa zvinyorwa.
Hi, Great post, ndatenda.
izvi zvachinja here nekufamba kwenguva? zvingave zvinonakidza kuona data razvino.
Ndine chivimbo chekuti, @mikemorrison1:disqus, kunyangwe kunyora kwangu hakuna kushanduka zvakanyanya. Injini dzekutsvaga dzinonyanya kukoshesa zvinyorwa 'zvakakora' iye zvino nemhando dzakasiyana-siyana dzenhau, zvinyorwa zvakawanda uye zvimwe zvinhu (mabara mavara, misoro miduku, nezvimwewo)
Iko hakuna mitemo yakaoma uye inokurumidza kuti ingani izwi pane positi rakarurama. Izvo zvinoenderana nemusoro wepositi, ingani positi inoda kutsanangurwa zvakadzama. Iyo posvo inogona kuve neakasiyana siyana senge mamwe mapositi madiki, epakati uye akareba muswe. Izvo zviyero zvakafanana zvinotsanangurwa mune ino positi seams aive neavhareji 832.3 mazwi pane positi ine midhiya ye512.5 mazwi pane positi. Iyo tangi yepamusoro blog yaive neavhareji 742.5 mazwi pane imwe post ine midhinha ye744 mazwi pane imwe post.
Gumiguru 12, 2014 na12: 57 PM
iyi ichiri ruzivo rwazvino?
Gumiguru 12, 2014 na1: 17 PM
Hatina kudzokorodza ongororo iyi mumakore asi ingangove nguva. Ndinotenda kuti Google iri kutarisa zvakanyanya pamapeji "akakora" ane mamwe mazwi pane peji kupfuura kare. Madhairekitori anga achichinja-chinja padanho zvinotaridza mumakore mashoma apfuura. Isu tinoedza kuve neashoma emazwi mazana maviri nemakumi mashanu uye tinoedza chaizvo kurova mazana mashanu kusvika kumazwi 250 nezvinyorwa zvatiri kuedza kuisa pazviri.